Home » Vaovao momba ny dia an-kolontsaina » Pitbull sy Mariah Carey hanasongadinana ny festival Jazz Curacao North Sea 2019
Manambara anarana vaovao ny fikambanan'ny Fetiben'ny Jazz ao amin'ny Ranomasina Avaratra Curacao. Hisokatra eo amin'ny sehatra Sam Cooke i Pitbull amin'ny zoma 30 aogositra ary amin'ny sabotsy - Mariah Carey. Voamarina ihany koa fa handray anjara amin'ny zoma i Maxwell, Michael McDonald ary Kenny G. Aloe Blacc ary David Sanborn dia nampiana ho an'ny laharana sabotsy. Izy ireo dia miditra amin'ny Maroon 5, Ozuna, Gladys Knight ary tontolo fahatelo efa nambara teo aloha. Hisokatra ny alakamisy 29 aogositra ny festival miaraka amin'ny kaonseritra maimaimpoana an'i Havana D'Primera sy Aymée Nuviola. Ny tapakila amin'ity takariva ity dia zaraina ao Sambil ny alahady 2 jona.
Pitbull dia rapper amerikana, mpamokatra ary mpamoron-kira avy amin'ny razamben'i Kiobà avy any Miami. Tamin'ny 2004, namoaka ny rakikirany voalohany MIAMI i Pitbull, izay nanasongadina be an'i Lil Jon. Hatreto dia namoaka rakikira folo izy, ny fiovan'ny toetr'andro 2017 farany. Ho an'ny rakikirany Dale 2015, Pitbull dia nahazo loka Grammy ho an'ny Album Latin Best, Urban na Alternative Album. Raha fintinina dia efa namidiny rakikira 5 tapitrisa mahery sy mpitovo 60 tapitrisa manerantany ary nahatratra ny laharana voalohany tamin'ny firenena 1.
Raha misy tsy mila fampidirana dia i Mariah Carey. Nanjary nalaza ilay mpihira tamin'ny taona 1990 niaraka tamin'ny gadona tokana Vision Of Love sy ny rakikirany voalohany. Avy hatrany dia nibanjina izao tontolo izao, tsy ny kely indrindra noho ny feon-kira dimy-oktave an'i Carey sy ny fampiasana sonia ny fisoratana anarana. Izy no lasa mpanakanto voalohany nahatratra ny laharana dimy voalohany azon'izy ireo voalohany teo amin'ny tabilao US Billboard Hot 100. I Carey dia nahazo mari-pankasitrahana Grammy dimy, loka sivy ambin'ny folo eran-tany ho an'ny mozika, loka mozika amerikana folo, ary loka efatra ambin'ny folo Billboard Music. Nivarotra rakikira 200 tapitrisa mahery manerantany izy.
Ny mpihira mpihira Maxwell dia nandray anjara mavitrika tamin'ny famoahana ny hetsika neo-soul tamin'ny tapaky ny faramparan'ny taona 90. Taorian'ny nahazoany laza teo amin'ny sehatry ny klioban'ny New York, dia nanao sonia fifanarahana fandraketana i Maxwell ary nanoratra tamin'ny rakitsary Maxwell's Urban Hang Suite tamin'ny taona 1996, izay nahazoany ny loka nomeny Grammy voalohany - miaraka amin'ny maro hafa. Taorian'ny rakipeo telo sy fiatoana fito taona dia namoaka ny BLACKsummers'night 2009 izy; ny fizarana voalohany an'ny trilogy izay ny ampahany faharoa, BLACKsummers'night, dia navoaka tamin'ny 2016.
Michael McDonald dia nihalehibe tany Missouri, nilalao tamin'ny tarika teo an-toerana talohan'ny nifindrany tany Los Angeles tamin'ny fiandohan'ny taona 1970. Tamin'ny 1974 dia lasa mpikambana tao amin'ny Steely Dan izy ary taorian'izay dia niditra ho mpikambana ao amin'ny Doobie Brothers. Amin'ny maha mpihira, mpitendry piano ary mpamoron-kira azy dia nandray anjara tamina hira malaza toa an'i Takin 'It To The Streets', It Keeps You Runnin ', ary ny Finoan'ny adala. Nandritra ny '80s and' 90s, ny asany irery dia nahalala fahombiazana toa an'i Sweet Freedom sy duets roa malaza: On My Own miaraka amin'i Patti LaBelle sy Yah Mo B Any miaraka amin'i James Ingram. Manana Grammy dimy amin'ny anarany izy; ny rakikirany farany Wide Open dia navoaka tamin'ny 2017.
Miaraka amin'ny varotra manerantany izay mitontaly maherin'ny 75 tapitrisa ny firaketana, ny saxophonist Kenny G no mpanan-talenta fitaovana lehibe indrindra amin'ny rehetra. Nihalehibe i Kenny Gorelick tao amin'ny manodidina an'i Seward Park any Seattle, nifandray tamin'ny saxophone izy raha nandre fampisehoana tao amin'ny The Ed Sullivan Show ary nanomboka nilalao tamin'ny faha-10 taonany. fivarotana rakikira instrumental mandrakizay; roa taona taty aoriana, ny rakikirany Miracles dia nanjary ny kirakira Krismasy be mpitia indrindra hatramin'izay. Manohy mitety an'izao tontolo izao i Gorelick; Navoaka tamin'ny 1992 ny rakikirany farany, Brazilian Nights.
Nanangana ny asany irery tamin'ny taona 2003 ny mpihira amerikanina iray, Aloe Blacc, tamin'ny taona 2010, nahita mpijery marobe niaraka tamin'ny tokana tamin'ny taona 2013 I Need A Dollar. Tamin'ny taona XNUMX, ny laharana Wake Me Up, izay niara-nanoratra sy nihira an'i Blacc niaraka tamin'ny DJ Swedia Avicii, no laharana voalohany tamin'ny firenena maro. Ny rakikirany fahatelo, Lift Your Spirit, dia nanomboka tamin'io taona io ihany, ary koa ny EP Wake Me Up. Tamin'ny fiandohan'ity taona ity dia namoaka ny singany farany izy hoe Gonna Sing; asongadina ihany koa izy ao amin'ny SOS, ilay tokan-tena vaovao an'ny avicii tara.
David Sanborn dia nanaparitaka ny fetran'ny karazan-karazany nanomboka tamin'ny taona valopolo taona ary hita ho iray amin'ireo saxophonista manan-kery indrindra eran-tany. Ny heriny tsy mitsahatra dia nandoa vola: i Sanborn dia nahavita firaketana volamena valo, iray platinum record ary Grammys enina. Nilalao ny sax hatramin'ny fahazazany i Sanborn dia namoaka ny rakikirany solo voalohany tamin'ny taona 1975; Ny fahazoana mivoaka dia heverina ho zavatra anisan'ny kilasin'ny jazz / funk ankehitriny.
SeaWorld San Antonio dia manokatra toeram-ponenana haran-dranomasina manara-penitra